Wasaarada dhalinyarada iyo Ciyaaraha iyo ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya oo kaashaneysa Maamulka Gobolka Benaadir iyo Xiirirka Olympikada Soomaaliyed ayaa waxey maanta si rasmi ah u fareen tartan oroda ah oo lagu maamuusaaye 6-da April oo ah maalinta caalamiga ah ee Ciyaaraha iyo Nabadda aduunka iyo sidoo kale maalinta Ciyaartoyda Soomaaliyed waxaana furitaanka tartankani oo goob joog ka aha Orodyahanka Soomaaliyed ee Cabdi Bile Cabdi.
Wasiirka Wasaarada Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Dowlada Soomaaliyed Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in tartankani oo qeyb ka yahay barnaamijyada ay wasaarada ku dhiirigalineyso nabadda iyo ciyaaraha.
Gudoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng: Yarisow) ayaa isna sheegay in horumarka iyo xasiloonida ay ku jirto gacanta umuda Soomaaliyed loona baahan yahay in qofkaste uu qaato doorkiisa.
Dhowr iyo labaatan sano kadib waa markii ugu horeysay oo tartankani lagu qabto magaalada Muqdisho iyadoo tartankani oo qeyb ka yahay dhiiragalinta isdhaxgalka bulshada iyo ciyaaraha.
WARKA 06 04 2018 Xildhibaanada mooshinka ka keenay Jawaari oo cududooda soo bandhigay hanjabaad kalena soo gudbiyey